Anbika Giri | Online Sahitya
पार्कमा एक घण्टा
केटोले केटीको ओठमा ओठ राख्न लाग्दा सम्म मैले हेरीरहे । केटीका आँखा बन्द थिए । जब उसले राख्यो नै तब मलाई अचानक खोकी आयो । मैले खोके, दुबै झस्किए । केटी लजाई, केटो रिसायो । यस्तो लाग्थ्यो उसले धेरै बल गरेर त्यो चुम्बन लिन खोजेको थियो । म बिचमा हलुवामा बालुवा भइदिए ।
"तँलाई पख!", केटोको रिस भरिएको आँखा मसँग जुध्दा मलाई गाली गरेजस्तो लाग्यो ।
"के यस्तो खुला ठाउँमा दिन दिउँसै गति छाडेको त!", मैले पनि आँखामा रिस नै ल्याएर आँखाको भाकामा भने ।
ऊ उतापट्टी फर्क्यो ।
Read more about पार्कमा एक घण्टा
Read more about बेपत्ता
Subscribe to Anbika Giri